Acha nko Magnets na-emepụta na ndị na-eweta ya | Horizon
A na-eji njupụta nko na-acha uhie uhie, magnetik magnetik mara mma ma ọ bụ ihe magburu onwe ya.
A na-egosipụta njupụta nko na-acha na ngbanwe agba dị na magnet nko Neodymium. Ọdịdị a dị mfe na-ebuwanye ibu ngwa. Enwere ike ịkụnye nko ahụ n'ụzọ dị nro ma ọ bụ si na ndọta magnet. Ọdịdị a dị mfe nwere ike ime ka ndị ọrụ gbanwee ụdị nko ahụ na ihe ha chọrọ. Nchara nchara sitere na nko magnetik mara mma nke Neodymium na-etinye ike magnet na-eduzi ya na ihu kọntaktị ka obere nju nke magnet wee nwee ike ijide ike. Ha na-enye nnukwu ọrụ dị iche iche maka ijide ihe dị iche iche dịka eriri, wires, eriri ma ọ bụ uwe n'ọtụtụ ebe, dịka ụlọ nkwakọba ihe, ọfịs, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, kichin, wdg.
Ihe Mere ị ga-eji họrọ ncha ncha agba
1. Keagwaraogwa agba dị: ọcha, nwa, green, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, odo odo na ọlaedo. You nwere ike ịhọrọ agba kachasị amasị gị, ma ọ bụ gwa anyị ụdị agba ọhụrụ ị nwere ike ịchọrọ. Ma mgbe ahụ, ha nwere ike ịkwakọba na nhazi nke agba gị chọrọ.
2 .Easy iji: The Neodymium ndọta na ígwè ite Ọdịdị site dị ike na-adọta ike na mgbe obere na kọmpat size nke magnet nko nwere ike izute gị chọrọ ejide ikike. Ọ dị mfe ibugharị ma wepụ ya, ị nwere ike iji nko ahụ ebe ọ bụla enwere ígwè ma ọ bụ nchara maka ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí.
3. Ezigbo ọdịdị: Ọdịdị nke nko na gburugburu ndọta magnet na-adị larịị ma na-egbu maramara.
4. Ọkọlọtọ nha na ngwaahịa ma dị maka nnyefe ozugbo
Nka na ụzụ Data maka agba ncha nju
Nọmba Nkebi D M H h Ike Nha ịbụ Oke Operating Okpomọkụ
mm mm mm mm n'arọ Iwu g Celsius C Celsius F
Nke gara aga: Igwe Igwe Igwe na eriri eriri
Osote: Nju Igwe na Eye Bolt
Ndidi Bu M ...
Pot Igwe Ọdụdọ na m ...
Igwe Ọdụdọ na B ...